Budata X-Proxy maka Windows
Free Budata maka Windows (0.56 MB)
X-Proxy bụ otu nime nhọrọ mbụ na-abata nuche ma a bịa na ngwanrọ nzuzo IP. Ị nwere ike iji mmemme a iji chọgharịa ịntanetị na -enweghị aha, gbanwee adreesị IP gị, gbochie ohi njirimara na ndị na -achọ ihe ọ bụla ịbanye na kọmputa gị site na iji sava IP nnọchiteanya.
Ị maara na a na -ekpughere adreesị IP gị oge ọ bụla ị gara na webụsaịtị? Enwere ike iji adreesị IP gị maka izu ohi njirimara, nyochaa ọrụ ịntanetị na ịnweta ozi nkeonwe gị. Ndị omekome, ndị ọchọ okwu na ọbụna gọọmentị nwere ike soro ọnọdụ gị kpọmkwem na adreesị ụlọ gị. Adreesị IP gị bụ kaadị njirimara gị na ịntanetị. Oge ọ bụla ị banyere na ibe weebụ ọ bụla, anyị na -ahapụrụ obere akara na sava na -echekwa ibe ahụ.
X-Proxy bụ nefu!
Site na X-Proxy, ị nwere ike igbochi ndị ọzọ ịhụ ezigbo adreesị IP gị mgbe ị na-achọgharị weebụ.
X-Proxy na-enye ịdị mma nke ịgbanwe adreesị IP na otu ọpịpị.
IP Zoo Mmemme Atụmatụ
Onye na -enye ọrụ ịntanetị (ISP) nyere gị adreesị IP gị na kọmputa gị mgbe ị na -ejikọ na Ịntanetị. Adreesị IP bụ nọmba njirimara pụrụ iche. A na -eji ya amata kọmpụta na weebụsaịtị niile dị na ịntanetị ma enwere ike iji nyochaa nkwukọrịta na weebụsaịtị niile ma ọ bụ mmemme ọ bụla na -ejikọ na ịntanetị. Nke a pụtara na mgbe ị na-eme mmemme X-Proxy na inteComputer gị, ị na-ejikọ na sava proxy ma ọ bụ VPN nke na-arụ ọrụ dị ka onye na-etiti netiti netwọkụ ụlọ gị na ịntanetị wee rịọ ozi site na iji adreesị IP nke ya karịa nke gị.
X-Proxy na-arụ ọrụ na Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, ọtụtụ ndị ahịa ozi ịntanetị ozugbo, egwuregwu na ihe ndị ọzọ. Ebe nrụọrụ weebụ niile gara ma ọ bụ ozi ịntanetị ezitere na -egosi na ị na -ejikọ site na IP adịgboroja. A machibidola gị na ọgbakọ, blọgụ ma ọ bụ saịtị ọ bụla ọzọ? Nweta weebụsaịtị ọ bụla site na ịgbanwe IP.
Ọgbara ọhụrụ na ịnweta interface
Ọ dakọtara na Internet Explorer, Google Chrome na Mozilla Firefox.
Ọ na -emelite nsụgharị na koodu na akpaghị aka.
Ọ na -emelite ma na -enyocha ndepụta nke sava proxy.
Chọọ mba site na adreesị IP.
Mee nyocha IP site na ngalaba aha.
Ping IP ma ọ bụ aha nnabata.
Kpochapụ akụkọ ihe mere eme na IE, Chrome na Firefox.
Ama amaghị aha
Sava nnọchiteanya na sava VPN
Ụdị mgbasa ozi niile, webụsaịtị ọjọọ, njigide ihe nchọgharị wdg. ihe mgbochi.
Etu esi eji X-Proxy?
Ihe mmemme a nwere ọmarịcha interface ya na Home, Proxy List na taabụ Ntọala nelu. Nakụkụ taabụ atọ, a na -egosipụta data gbasara ezigbo IP gị, IP adịgboroja na ọnọdụ amaghị aha. Pịa taabụ ndepụta proxy iji nweta ndepụta sava proxy ịhọrọ site na. Pịa ugboro abụọ na proxies ọ bụla dị adị na ndepụta ahụ ga-agbanwe adreesị IP gị. A na -egosi ọkwa na akuku aka nri ala ihuenyo ahụ mgbe adreesị IP gị gbanwere. Taabụ Ntọala dị na isi ihe na -enye gị ohere ịgbanwe asụsụ mmemme, isiokwu, lelee ozi amaghị aha, mee nnwale ọsọ ịntanetị, wdg. na -enye ohere. Họrọ Weghachi ezigbo IP ka ịlaghachi na ezigbo adreesị IP gị.
Kedu otu esi ezo IP?
Mgbe ụfọdụ kọmputa gị enweghị ike ịnweta ịntanetị ma ọ bụ enwere ike jiri adreesị IP gị lelee gị nke ọma. Noge a, azịza ịgbanwe adreesị IP ka a na -ahụta dị ka ihe bara uru maka ọtụtụ ndị ọrụ. Yabụ, kedu ka esi agbanwe adreesị IP ngwa ngwa na nụzọ dị mfe? Kedu esi zoo IP?
Budata ma wụnye X-Proxy iji gbanwee adreesị IP gị ngwa ngwa.
Mgbe ị na -agba mmemme ahụ mgbe nrụnye ahụ mechara, ị ga -ahụ interface dị mfe.
Pịa Ndepụta Proxy iji budata ndepụta proxy. Ị nwere ike ịgbanwe adreesị IP nke kọmputa gị site na ịpị ụfọdụ adreesị IP ugboro abụọ na listi nnọchite anya dị ka paramita dị na ogwe ọnọdụ nnọchi anya. Ị nwere ike mụta adreesị IP nke kọmputa gị ugbu a site na ngalaba IP nezie, yana adreesị IP nke ị họrọ ịgbanwe site na ngalaba IP adịgboroja.
Nha faịlụ: 0.56 MB
Mmepụta: Sauces Software